Maxaad Noo Dooratay | Jiangxi OK Sayniska iyo Teknolojiyada Co., Ltd.
Tiknoolajiyadda OK waxay leedahay koox xoog iyo xirfad leh oo diiradda saaraya mashiinnada waraaqaha waraaqaha ah iyo mashiinnada sameynta maaskaro in ka badan 10 sano.
gudoomiyeheena Mr.Hu jiangsheng sidoo kale waa hogaamiyahayaga iyo madaxa injineerkeena
in ka badan 60 naqshadeeyayaal farsamo oo khibrad u leh mashiinka, in ka badan 80 injineero wata baasaboor iyo khibrad adeeg dibadeed.
Maareeye kasta oo iib ah wuxuu leeyahay ugu yaraan 10 sano aqoonta warshadaha mashiinada sidaa darteed waxay isla markiiba fahmi karaan baahidaada waxayna ku siin karaan soo jeedinta mashiinada si sax ah.
2. Khad Dhammaan “Mashruuca Turkiga”
Waxaan hogaamineynaa soo jeedinta iyo hirgalinta dhamaan qadka "fikrada mashruuca" fikradda adeega ee warshadaha. Waxyaabaheenu waxay daboolayaan mashiinka warqadda duudduuban ee jumbo illaa mashiinnada waraaqda waraaqaha lagu beddelo iyo mashiinnada wax lagu rakibo si macaamiilkeennu ugu raaxeysto adeegga hal-joogsi Waxaan mas'uul ka noqon doonnaa waxqabadka mashiinka qadka oo dhan iyo tayada oo aan ka fogaanno khilaafka ka dhexeeya alaab-qeybiyeyaasha mashiinnada kala duwan.
Waxaan haynaa mashiin kala duwan oo leh karti wax soo saar oo kala duwan, darajo kala duwan oo otomaatig ah si macaamiisha oo dhami ay u helaan mashiinada ugu habboon ee u dhigma cabirkooda iyo awooddooda.
3. Tayo wanaagsan iyo qiimo macquul ah, iibinta kadib walwal la'aan
Fikradda OK Technology waa "Kalsoonidu waxay ka timaaddaa xirfadaha xirfadeed, kalsoonidu waxay ka timaaddaa tayo dhammaystiran". Iyada oo ku saleysan hubaasha tayada, waxaan siinay macaamiisha qiimaha ugu wanaagsan.
Nidaam adeeg iib ah oo dhammaystiran oo xasilloon ka dib wuxuu hubiyaa in macaamilku si dhakhso leh u heli karo maareeyahaaga iibka iyo injineerada iyo kooxdayadu had iyo jeer waxay kugu taageeri doonaan taleefan, emayl, farriin deg deg ah haddii aad iibsanayso qalabka dayactirka ama cilad bixinta mashiinka. Ma jiraan wax walwal ah oo ku saabsan adeegga iibka kadib.